ILake Front Luxury eLake Macquarie
Leli khaya lesimanjemanje laseLake Macquarie elingaphambili kwamanzi linikeza umklamo wesimanje omangalisayo, othwebula ukubukwa kwamanzi epanorama. Zizungeze ngokwemvelo futhi ujabulele inkululeko yokuhlala echibini elingaphambi kwechibi endaweni ekude nje ukusuka e-Sydney nase-Newcastle. Gcoba kumagumbi okuphumula esikhumba anethezekile etiyetha yakho yasekhaya, jabulela ubusuku bokuzilibazisa kwezinye izindawo zokudlela ezihamba phambili zasendaweni namakhefi, ibhodi lokugwedla echibini, ngenisa isikebhe noma uthathe idrayivu esheshayo uwele ngaphambili ogwini ukuze uthole ukuntweza. Izinketho azinamkhawulo!
Ukubuka kwamanzi ngaphambili kuyakwamukela kulesi sakhiwo esikhethekile seLake Macquarie. Ipulani lesitezi eliklanyelwe lesimanje linikeza indawo yokuhlala enezinga elilodwa elinamagumbi okulala amathathu. I-Main inombhede omkhulu, i-ensuite enosayizi ogcwele, izembatho zokuhamba ngezinyawo kanye ne-heater eyi-duct kanye ne-air-conditioning. Okwesibili kunombhede olingana nendlovukazi, izembatho ezakhelwe ngaphakathi kanye nezinto zokufudumeza ezifakiwe kanye ne-air-conditioning. Igumbi lesithathu lokulala elinemibhede emibili, i-king-single, izingubo zokugqoka ezakhelwe ngaphakathi, izinto zokufudumeza ezixhunywe ne-air-conditioning kanye negumbi lokugezela elikhulu elinobhavu ophelele. Wonke amagumbi okulala afika noqalo lwekhwalithi kanye namalineni kakotini, amathawula nemikhiqizo yokugezela ye-Tiger Lily.
Ikhishi lomklami elinebha yasekuseni ne-pantry eyakhelwe ngaphakathi linikeza izinketho ezinhle zokuzijabulisa zasekhaya. Zonke izinto zakho zokupheka, i-table-ware kanye nezitsha kuyatholakala ukuze kudlelwe izivakashi eziyisithupha ngaphakathi ngaphandle. Jabulela i-BBQ endaweni yakho eyimfihlo, ebheke enyakatho evula umnyango ngenkathi ugcwala ukubukwa kwe-panoramic eseceleni kwechibi.
Jabulela umuzwa wesinema wetiyetha yasekhaya, izindawo eziningi zokungcebeleka/zokuphumula kanye ne-wi-fi yamahhala ukuze uxhume ku-Netflix yakho, i-Stan njll. I-Netflix yamahhala etholakalayo futhi esizeni, indawo yokupaka izimoto ezimbili ngaphandle komgwaqo (kanye ne-trailer) iyatholakala futhi ngokunethezeka kohambo lwakho lomgwaqo.
Uhlezi endaweni eyimfihlo futhi ephanayo engama-620sqm engasogwini, imidlalo yakho ayipheli inesikhala esanele sekhilikithi engemuva kwegceke, ukugibela ama-paddle boarding echibini, ukuntweza kanye nokugibela ogwini noma nje ukujabulela ukuhamba ngezinyawo ukuya ezitolo nasezindaweni zokudlela.
Letha isikebhe se-trailer noma i-jet-skis nerempu yendawo yesikebhe etholakala kalula emgwaqeni ofanayo cishe ongamamitha angama-300! Leli khaya likanokusho litholakala kuphela imizuzu eyi-15 ukuya kumgwaqo onguM1 nemizuzu engama-50 ukuya eWahroonga.
ILake Macquarie iyindawo kahulumeni wasekhaya esifundeni saseHunter saseNew South Wales, e-Australia. Le ndawo yakhiwe eduze kwedolobha laseNewcastle futhi iyingxenye yeGreater Newcastle Area. Idolobha licishe libe yi-150 km enyakatho ye-Sydney CBD. Enye yezinto ezikhanga izivakashi echibini layo, elibuye libizwe ngeLake Macquarie.
Indlu iyiLake-front enikezela ngamathuba angenamkhawulo wemidlalo yasemanzini njengokuhamba ngesikebhe, ukudoba, ukugibela i-wake boarding, ukugwedla-ukugibela kanye ne-kayaking.
Njengoba kusele isikhashana solwandle oluhle, izinketho zakho zemidlalo yasemanzini ziyaqhubeka nokuntweza, ukubhukuda noma ukuzihlalela nje uphumule endaweni enokuthula.
Ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili kuyimisebenzi edumile endaweni yasendaweni enamathrekhi amabhayisikili akhethiwe kanye nokuqashwa kwamabhayisikili okutholakala eduze kwase-Boomerang Bikes.
Njengoba kunedlanzana lamakilabhu egalofu endawo amukela izivakashi, ulwazi lwakho lwegalofu alupheli nge-Belmont Golf Club, i-Charleston Golf Club, i-Toronto Golf Club, i-Sugar Valley Golf Club kanye ne-Waratah Golf Club, konke okukude.
Bheka izindawo zokudlela ezinhle nokuzijabulisa kwasendaweni noma udle ne-Wooolworths, iLake Munmorah ibanga eli-4 kuphela ukusuka lapho!
Unayo ikhonsathi ebhukhelwe isifunda sase-Hunter Valley? Lena indawo enhle yohambo olusheshayo oluya endaweni yakho yewayini yase-Hunter Valley.
Leli khaya likanokusho elokusebenzisa wena kuphela. Umsingathi utholakalela izimo eziphuthumayo.